Yeeyyis Birruu: Ogeessa fayyaa fiilmii Jaatanii Jireenyaa barreesse - BBC News Afaan Oromoo
Yeeyyis Birruu: Ogeessa fayyaa fiilmii Jaatanii Jireenyaa barreesse
Image copyright Yeeyyis Birruu
Fiilmiin 'Jaatanii Jireenyaa' tibbana eebbifame kutaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti agarsiifamaa jira.
Barreessaa fiilmiichaa kan tahe Yeeyyis Birruu Nagaroo BBC waliin turtii taasiseen, fiilmiin Jaatanii Jireenyaa fiilmoota kaan irraa waan adda isa taasisuu qaba jedha.
Isa dura garuu jaatanii jireenyaa jechuun maal jechuudha? kan jedhu yoo ibsu akka aadaa Oromootti ''namni tokko bara kana yoo fuudhe ykn cidha irra yoo bahe, jechuun ilma yoo fuusisate ykn intala heerumsiifate jaatanii keessa jira jedhama. Mana ijaarrataa jira yoo tahes, namtichi jaatanii keessa jira.''
Dabalataan namni jaatanii keessa jiru na gargaaraa jedhee nama hin kadhatu ykn hin gaafatu. Namootuma isa beekan, hiriyyaas tahu ollaatu iyyaafatee bahee waan isa gargaaruu qaban irratti isa tumsu.
Kanaafuu fiilmiin Jaatanii jireenyaas jireenya hawwaas-dinagdee fi siyaasa hawwaasichaa aartiin qabee kan haasa'udha akka yaada barreessaa fiilmichaa Yeeyyis Birruutti.
''Hawwasni mugee akka hin hafneef tutuqeera jedheen amana. Gara malee gowwummaan deemaa jira yoo tahu ammoo gmnumaa isa keessatti bituu danda'a.
Oromoon hammataadha yeroo jedhamus harka bitaan hammataa gama kaaniin ammoo ogummaa akka isa barbaachisu ergaa dabarseera jedheen amana'' jedhe.
Yeeyyis Birruu ogeessa fayyaa yoo tahu hojiin isaa idilee hospitaala Ispeeshalayizdii Naqamteetti narsii [midwifer]deesiftuudha.
Haa tahu malee kanaan duras kitaabota akka ''Ilkee Arrabaa fi Cuunfaa Dhiigaa'' jedhaman barreessuun harka dubbistootaan gaheera.
Ogeessa fayaa kana maaltu gara aartiitti akka dhufu taasiseree gaaffii jedhuufis Yeeyyis barmaata tahee hawwaasa keenya keessaa namootni baay'een waanuma tokkoo fi wal fakkaataa hojjechuu filatu jedha.
Sanaan alas waa hojjechuu kan danda'an itti hin fakkatu. Uumaan garuu waan hundaa nu badhaaseera jedhee dhalli namaa dandeettii tokko qofaa waliin osoo hin taane dandeettii garaagaraa hedduu waliin uumame jedheen amana jedha.
Kanaafuu namootni hedduun kennaa fi dandeettii isaan keessa jiru osoo baasanii itti hin fayyadamiin hafu jedhee anis waanuman uumaman argadhe kanan gabbisee bifa amma mul'atuun baase jedhe.
Bakki oolmaa koo dubartoota ciniinsitan waliinidha kan jedhu Yeeyyis kutannoodhaan hojjechuun koo garuu akkan kallattii lamaaniinuu milkaa'u na taasiseera jedhe.
Jaatanii Jireenyaa maaltu adda godha?
Fiilmiin Jaatanii Jireenyaa aartii Oromoof namoota haaraa hedduu gumaachu dubbata.
''Ana barreessaa filmichaa irraa eegalee taatota hundaa, daariktera,ogeessa ibsaa fi namootni keessatti hirmaatan hundinuu kanneen kanaan dura fiilmii afaan Oromoo keessatti hin hirmaannedha'' jedha.
Taatotni fiilmicha keessaa bifa ogummaan akka poolisiitti, dookteraatti, ogeessa seeraatti hirmatanii fi kaan hundinuu namootuma ogummaadhuma isaanii kanaan hojjechaa jiranii fi fedha aartii qabanidha jedhe.
Fiilmiin Jaatanii Jireenyaas aartii Oromoof gumaacha guddaa qaba jedheen amana jedha Yeeyyis Birruu. Fiilmiin Jaatanii Jireenyaa kutaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti agarsiifamaa jira.
Fiilmonni afaan Oromoo guddina afaanichaa waliin kan walgitan tahuu baatus yeroo dhiyoodhaan asitti garuu fiilmonni hahhaaraan hojjetamuun daawwatootaaf dhiyaachaa jiru.